Budata IRIS F-35B Scimitar FA.2 FSX & P3D - Rikoooo
downloads 32 913
Iris ụgbọ elu ịme anwansị Software
N'ihi na FS2004 dakọtara version pịa ebe a
-Agụnye 6 na ụdị na-11 textures. -Agụnye oge a virtual kokpiiti na 2D panel. -Agụnye omenala ụda, n'ụzọ dị irè burner mmetụta, multiple animations. Echefula na-agụ Handbook.pdf.
The Lockheed Martin F-35 Lightning II bụ ezinụlọ otu-nmehie, otu-engine, ise ọgbọ multirole alụso n'okpuru mmepe ịrụ n'ala agha, nyoputa onyeiro, na ntụ ozize ọzọ na stealth ike. The F-35 nwere atọ isi ụdị; na F-35A bụ a ot takeoff na ọdịda variant, nke F-35B bụ obere gbapụ na vetikal-ọdịda variant, na F-35C bụ a ụgbọelu dabeere variant.
The F-35 na-sitere ná ndị X-35, bụ ndị Joint Ebu Agha (JSF) omume. JSF mmepe a na-karịsịa bukwa ndi United States, na United Alaeze na ndị ọzọ na ibe ọchịchị na-enye ndị ọzọ ego. The ibe mba bụ ndị ma NATO òtù ma ọ bụ nso US allies. Ọ na-e mere na wuru ihe aerospace ụlọ ọrụ otu edu Lockheed Martin. The F-35 rụrụ ya nke mbụ ya ụgbọ elu on 15 December 2006.
The United States na-ezube ịzụta a ngụkọta nke 2,443 ugbo elu na-enye nnukwu nke ya kenkwucha airpower maka US Air Force, Marine Corps na n'Òtù Ndị Agha Mmiri na-abịa abịa ọtụtụ iri afọ. The United Kingdom, Italy, Netherlands, Australia, Canada, Norway, Denmark, Turkey, Israel na Japan bụ akụkụ nke mmepe usoro na nwere ike itinye ha ikuku ọrụ na F-35 (Wikipedia)
Onye edemede: Iris ụgbọ elu ịme anwansị Software